Kutambidzana Masimba muAmerica Koramba Kuchikonzera Mutauro
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yebato reZanu PF, Va Simba Mujuru, vanoti havawoni pane chinotadzisa mutungamiri mutsva weAmerica, Va Joe Biden, kuti vagadzwe zviri pamutemo mwedzi unouya, kunyange hazvo mutungamiri we America, VaDonald Trump nedzimwe nhengo dzebato ravo re Republican Party, vachiri kupikisa zvakabuda musarudzo.
Electoral College yakatambira kuti VaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri we America asi dzimwe nhengo dzebato remaRepublican naivo VaDonald Trump varikupikisa izvi.
"Zvatiri kuona zvichiitika ndiko kunonzi kutonga kwejechetere chaiko nekuti parizvino VaTrump vane vhumo yekupikisa zvakabuda musarudzo kana vasiri kufara nazvo asi chikuru chatirikuda kuwona ndechekuti vane rudo rwenyika yavo here pamoyo zvichaita kuti vasiye matomhu pasina bopoto mwedzi uno uya pachagadzwa VaBiden," VaMujuru vaudza Marvellous Mhlanga-Nyahuye weStudio7.
Vanoti vakatarisira kuti hurumende idzva yaVaBiden ichapa nyika yeAmerica hwaro hwekurwisa denda reCovid-19 rapfunya chisero munyika iyi asi zvinoda kuti veruzhinji vabatane nehurumende mukurwisa denda iri.
Vachitaura pamusoro pemakurukota adomwa naVaBiden parizvino VaMujuru vanoti varikufadzwa nenyanzvi dzapihwa mabasa parizvino uye vanetarisiro yekuti zvinhu zvicha sanduka muAmerica kusanganisira kudyidzana kwenyika iyi neZimbabwe.
Hurukuro naVaSimba Mujuru